Kormeerayaasha Ka Socday Qaybaha Ururada Bulshada Somaliland Oo Ka Hadlay Qaabkii Codbixinta Doorashada | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN ) Kormeerayaasha ka socday Ururada Bulshada Somaliland ayaa ka hadlay qaabkii
ay u dhacday doorashadii madaxtooyada Somaliland ee sabtidii todobaadkan ka qabsoontay dalka Somaliland.
Qoraal ay maanta kazoo saareen kormeeyashaasu ayay kaga hadleen qaabkii ay u dhacday doorashada
madaxtooyada oo mudadii ay socotay codbixintu ay indhaha ku hayeen. Qoraalka ay kasoo saareen kormeerayaashu qaabkii codbixinta iyo sidii ay u qiimeeyeen, waxay u qornayd sidan;
“ War-saxaafadeedka ka soo baxay SONSAF , ayaa isagoo dhammaystiran u dhignaa sidan: “SONSAF waxay dalka oo dhan ka hawl gelisay goobjoogayaal ka socda bulshada rayidka ah oo dhexdhaxaad ah kana soo warbixiya in doorashadii madaxtooyada ee bisha June 26,2010 ka dhacday guud ahaan dalkoo dhan. Doorashadaasi waxay u qabsoontay si nabad ah oo lagu qanci karo.
SONSAF waxay ka hirgelisay Somaliland oo dhan isku duwid dhexdhexaad ah ee goobjoognimada doorashada madaxtooyada ee bishii Juun 26-da. SONSAF waxay heshay 1000 warbixinood, kana yimi in ka badan 700 oo goobjoogayaal loo tababray lana geeyey in ka badan 900 goob oo codbixineed oo ku baahsan 6da gobol ee Somaliland. In ka badan 40% ee goobjoogayaashu waxay ahaayeen haween. SONSAF waxay adeegsatey foomam goobjoognimo oo isku mida kuwaas oo caddaynaya hab raaca furaha u ah codaynta oo ay ka mid yihiin furida goobta codbixinta, codaynta xidhista goobta iyo tirinta codadka.
Goobjooyaaashu waxay ku ekaayeen goobaha codaynta maalintii oo dhan. Hase yeeshee meelaha qaarkood waxay ka wada shaqaynayeen dhawr goobood oo isku meel ku yaalla ama isu dhaw dhaw. Warbixinta waxay u soo gudbiyen habraac xidhiidhsan sida goob, degmo, gobol ilaa iyo heer qaran oo hoos imanaya isku duwidda guud ee xoghaynta SONSAF. Magaala madaxyada gobolladu waxay ahaayeen xarumaha xog ururinta xoghaynta SONSAF. Caasimada Hargeysana waa xarunta xog ururinta dhexe ee dalka oo dhan iyo xarunta lafo-gurida halkaas oo lagu caddeeyo tayada laguna lafa-guro dhexdhexaadnimada warbixinaha ee heerarka goobjoogidda doorashada aan dhinacna u xaglinayn.
Bishii May 2010, SONSAF waxay qoraal isfaham la saxeexatay guddida doorashooyinka qaranka (NEC) oo wadada u xaadhay qaabka isku duwidda ee labada haya’dood wakhtigii la samaynayay hawlaha goobjoogidda gudaha ee doorashada madaxtooyada.